Bianco-Fid: fiaraha-miasa hiadiana amin’ny kolikoly | NewsMada
Bianco-Fid: fiaraha-miasa hiadiana amin’ny kolikoly
Natao sonia, omaly, ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny Bianco sy ny Tahirimbola ho an’ny fampandrosoana (Fid), iadiana amin’ny kolikoly. Mandritra ny telo taona ny fifanarahana ka tanjona ny tsy handeferana mihitsy amin’ity fanetriben’ny firenena ity. Endrika iray hanamafisana ny fanjakana tsara tantana ihany koa, tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’ny Fid.
Mampihena ny fitomboana toekarena ny kolikoly, izay efa mahazo vahana manerana ny sehatra maro eto Madagasikara. Izay ny nahatonga ity fiaraha-miasan’ny Fid sy ny Bianco ity, hampiroboroboana ny fitondrantena mendrika sy ny mangarahara. Nambaran’ny tale jeneraly vonjimaika ny Fid, Rajaoharilala Serge, fa “nampiharin’ny Fid, nanomboka ny taona 2014, ny fomba fitantanana ahitana soritra ny maha olom-pirenena ho an’ireo mpisehatra rehetra mba ho tena tompon’andraikitra, hanamafisana ny fanajana ny zon’ny tsirairay sy ny vahoaka eny ifotony, hanehoana ny mangarahara amin’ny fitantanana ny tetikasa rehetra ary koa hisian’ny tamberin’andraikitra any amin’ny vahoaka”.
Vaomiera manokana hiady amin’ny kolikoly
Hanamarinana izany, hapetraka ao anivon’ny rantsa-mangaikan’ny Fid, manomboka izao, ny vaomiera miady amin’ny kolikoly (CAC), hanentana ny mpiasa sy ny mpiara-miombon’antoka samihafa, hisian’ny mangarahara, miaraka amin’ny drafitrasa hanatanterahana azy.
Ho an’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis, “raharaha iombonan’ny rehetra ny ady amin’ny kolikoly ary mitaky ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay raha tian-ko tratra ny tanjona. Tsara ity fanaovan-tsonia ny fifanarahana ity, saingy ilaina ny tena fampiharana azy araka ny tokony ho izy. Endriky ny finiavana avy any amin’ny sehatra tsy miankina hiadiana amin’ny kolikoly ny nasehon’ny Fid”.
Hanampy ny Fid hametraka ny CAC ny Bianco ary hanohana amin’ny fanabeazana sy ny fanentanana ny daholobe hiadiana amin’ny kolikoly. Hiandraikitra ny fitiliana sy ny famantarana ny sehatra mety ahitana na hiteraka kolikoly koa izy, sady handroso soso-kevitra sy vahaolana.